साहित्य « रिपोर्टर्स नेपाल
चितवन, १५ मंसिर । युवापुस्ताका चर्चित कथाकार वसन्त पराजुलीद्वारा लिखित नवीनतम कथा सङ्ग्रह ‘मोम्चो’ प्रकाशनमा आएको छ । भूँडीपुराण प्रकाशन प्रालिद्वारा प्रकाशित सो कृतिमा ११
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर: नेपाली काँग्रेस नेता लोकेश ढकालद्वारा लिखित‘नेपाली राजनीति : राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न तहको नेतृत्व
काठमाडौं, २ मंसिर । डा. जनकराज भट्टको नयाँ कृति बजारमा आएको छ । राजनीतिशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक भट्टले यसअघि विविध विषयमा तीनवटा कृति प्रकाशन गरिसकेका छन् भने एक कृति प्रकाशनोन्मुख अवस्थामा
काठमाडौं, १ मंसिर । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई साहित्यकार परिचयपत्र दिए । त्यो सरकारले दिएको परिचयपत्र हो । सत्यमोहन जोशीको परिचय सरकारलाई हिजोमात्र थाहा भएछ । त्यस्तै,
चितवन, २६ कात्तिक: चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा नेपाल–भारत साहित्य उत्सव हुने भएको छ । कविडाँडा साहित्य समाजको १९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यही कात्तिक २७ र २८ गते उक्त उत्सव आयोजना
काठमाडौँ, २६ कात्तिक: नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले बहुप्रतिक्षित लेखक-साहित्यकार परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । आउँदो आइतबार हुने प्रतिष्ठानको ३६ औँ प्राज्ञसभाको उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सोमबार पद्म सम्मानका लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा फरक भेषभुषाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु देखिन्थे । टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिएकामध्ये नेपाली टोपी लगाएका लिलबहादुर क्षेत्री पनि थिए
काठमाडौं, २२ कात्तिक । नेपाली भाषाका साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीलाई भारत सरकारले पद्मश्री उपाधिले सम्मान गरेको छ । भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले आज दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा क्षेत्रीलाई पद्मश्रीले सम्मान गरेका हुन्
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । नेपाली मूलधारका चलचित्रमा आमरूपमा खलनायकविरूद्ध नायकत्वका कथानक चरित्र प्रस्तुत गरिन्छ । फरकधारमा बनेका चलचित्रले पनि विषयवस्तुमाथि गहन खोज, अनुसन्धान र उत्खनन नगरेको टिप्पणी आउने गरेका बेला
सप्तरी, १६ कात्तिक । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११३औँ जन्मजयन्ती भोलि (बुधबार) विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्तरीको कञ्चनरुपमा मनाइँदैछ । सगरमाथा साहित्य परिषद् र प्रगतिशील लेखक संघको आयोजना तथा कञ्चनरुप नगरपालिकाको सहयोगमा
काठमाडौँ, १० कात्तिक । नेपाली चित्रकारितामा हरिप्रसाद शर्मा इतिहास, शङ्करराजसिंह सुवाल संस्कृति, हीरालाल डङ्गोल–हेम पौडेल–जीवनाथ पोखरेल चराले चिनिए । लैनसिंह बाङ्देल खासगरी कुचीमा नीलो रङ चलाउथे । रमेश खनाल अरुपण,
ओशो रजनीश : आधुनिक शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको उत्तर दिन भने सजिलो छैन । किनभने आजभन्दा अगाडि संसारमा शिक्षक छँदै थिएनन् । शिक्षकको उपस्थिति नै